KA KUGU AGTUKANAAYA AYAA KU TOOGANAAYA . | ToggaHerer
← Daawo: Wasiirka Qorshaynta Somaliland Oo Ka gaabsaday in uu faahfaahin ka bixiyo Kulan uu la yeeshay Gudida Dabagalka Hantida Qaranka .. iyo Gudoomiyaha Gudidaas oo ka waramay kulankooda
Warsaxaafadeed ka soo baxay odayaasha musdambeedka jaaliyadaha reer Somaliland ee deggen, carriga ingiriiska kuna wajahan baaq nabadeed laba dulmane xadhigga adag →
KA KUGU AGTUKANAAYA AYAA KU TOOGANAAYA .
Dadkani ama kooxahani miyay waallan yihiin ? mise waa doqmmo ? mise cid kale ayey u shaqeeyaan ?
Waxa maalinba maalinta ka danbeysa ka sii daraysa , lalana yaaban yahay , kooxahan magaca islaamka dadka ku laaya , ee ficilada iyo xumaanta ay ku hayaan ummada muslimiinta ah.
Ficilada ay samaynayaan ee ku kacayaan , islaamka meelna kagama jiro , islaam nimana maaha .
Ma waxa islaam nimo ah , inaad dad meel iska fadhiya , aad iska layso ? ama isku qarxiso ? iyaga oon waxba kuu gaysan , welibana aanad garanayn waxaa ay yihiin ? ma waxa islaam nimo ah , inaad dumar iyo caruur iyo ciroolayaal aad iska layso, aan waxba kuu gaysan , oo muslimiin ah , oo aad tidhaahdo waan ku jihaadayaa , ma sidan baad janno doonaysaa inaad ku gasho ? diintan sidaa ku fararaysaa xaggay ka timi , illeen islaamka meelna kagama jirto ee ? waa maxay diintan ku faraysa inaad dadka iska layso ? ma diin cusub baa ?
Hadaba waxaynu wada garan karnaa inay dadkanu yihiin dad buka oo aan dhamayn .
Hadaba yaa maal geliya dadka sidan ah ?
Yaa taageera ?
Xaggay dhaqaalaha iyo hubka ka helaan ? iyo tababarkaba ?
Ma waxa inagu dhex jira , dad sidooda oo kale buka oo taageero iyo dhaqaaleba siiya ?
Waxaynu maqalaa waxa caawiya oo dhaqaalaha iyo hubka iyo tababarba siiya maraykanka iyo israa iil , si kooxahani islaamka magac xumo ugu soo jiiddo , sawir iyo aragti fool xunna islaamka loogu shaabadeeyo .
Kooxahan oo ay shaqadoodu tahay , inay dadka muslimiinta ah isku diraan , kalana qaybiyaan oo ay koox koox ka dhigaan is neceb .
Dawladaha reer galbeedkuna inta waxay sheegayaan oo ay fidinayaan , in islaamka iyo muslimiinta baysha caalamku iska ilaaliyaan .
Mana qarsadaan sida ay islaamka ula dagaalamaan .
Falalka ay geystaan kooxahan argagixisooyinka ahi , waxay sababtay , in dadka muslimiinta ah mel kasta oo lagula kulmo in la cadaadiyo , in xaquuq doodana la dood siiyo – inaan la ixtiraamin – waxaana beesha caalamka laga dhaadhiciyey, inay ummada muslimka ahi , yihiin qaar bulshada aduunka inteeda kale ka duwan, cadawna u ah .
Waxa ammadaha caalamka laga dhaadhiciyey aa kale , in ay waajib tahay in lala dagaalamo dadka muslimka ah , lana laayo , iyada oo aan cidina ka nixin , laysna waydiin maxaa dadkan loo laynayaa ? looguna duulayaa / maxay geysteen ?
Hadaba ficilada kooxahani dadka muslimiinta ah , dhibaatooyin bay ku hayaane maxay u samaynayaan wax yaabahan ?
Miyay waallan yihiin ?
ma doqommaa ?
mise cid kale ayey u shaqeeyaan ? aan muslim ahayn ?
M a suurto galbaa , qofkii iminka kula tukanaayay , ayaa ku tooganaaya ?
ama masaajidkii uu ku tukanaayay ayuu isku dhex qarxinayaa ?
FIcillo islaam maaha ? islaamkuna waa ka barii .
Arimahan iyo ficilada kooxahan maaha islaamnimo . islaam kana meel na kama soo galaan .
Hadaba waxa iyana iswaydiin leh : dadkani xaggay nooga yimnaadeen .
Ma insibaa mise maaha (………………)
Kooxahan dadka wada gaalaynaaya , sharcigana cagantooda ku fulinaaya
yaa u igmaday inay xilkaa qaataan oo isa siiyaan , waxay doonaanna sameeyaan , kuna adeegtaan magaca islaamka
waxay u baahan yihiin in iyaga dib loo soo hanuuniyo , islaamka dhabta ahna la baro .